Read more	​ရှက်​စိတ်​တို့ ​န​ဝေင်​ချိန်​ရောက်​ပြီ​လား
ပ​ထ​မ ​အ​ကြိမ် ​အ​မျိုး​သား​လွှတ်​တော် ​ဥ​က္က​ဋ္ဌ ​ဦး​ခင်​အောင်​မြင့်​က ​နိုင်​ငံ ​ပိုင် ​စီ​မံ​ကိန်း​ကြီး​တွေ​မှာ ​ဆီး​သီး ​ဗန်း​မှောက်​တဲ့​ဖြစ်​စဉ်​တွေ ​ရှိ​ခဲ့ ​တယ်​လို့ ​လူ​သိ​ရှင်​ကြား​ထုတ်​ဖော် ​ပြော​ဆို​ခဲ့​ဖူး​တယ်။ ​ဒါ​တွေ​က ​ရှက် ​တတ်​ရင်​တော့	​သန်း​နိုင်​ဦး
Read more	​ဒေါ်​အောင်​ဆန်း​စု​ကြည်​၏ ​နေ​ရာ ​ပုဒ်​မ ၂၁၇
၂၀၀၈ ​ဖွဲ့​စည်း​ပုံ ​အ​ခြေ​ခံ​ဥ​ပ​ဒေ ​အ​ခန်း (၅) ​အုပ်​ချုပ်​ရေး ​ခေါင်း​စဉ်​အောက်​ရှိ ​ပုဒ်​မ ၂၁၇ ​ကို ​အ​မျိုး​သား​ဒီ​မို​က​ရေ​စီ​အ​ဖွဲ့​ချုပ် ​ပါ​တီ​ဝင်
​ပြည်​သူ့​လွှတ်​တော်​ကိုယ်​စား​လှယ် ​တစ်​ဦး​က ​အ​ရောင်​ခြယ်​ပြ​သည်။	Arkar Sai
Read more	မြန်​မာ​ပြည်​ဒီ​မို​က​ရေ​စီ ​ရ​ပြီ​လား
​ ​စစ်​တပ်​ဘက်​ကို ​ပြန်​စိ​စစ်​ကြည့်​ပါ။ ​အ​ပေါ်​ယံ​ကြည့်​ရင် ​သူ​တို့​ဟာ ​ဖွဲ့​စည်း​ပုံ​အ​ရ ​အာ​ဏာ​အ​ရှိ​ဆုံး ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ​သ​မ္မ​တစ်​နေ​ရာ၊ ​ဝန်​ကြီး(၃)​နေ​ရာ၊ ​လွှတ်​တော်​မှာ (၂၅)​ရာ​ခိုင်​နှုန်း​နဲ့ ​ကာ​လုံ​မှာ (၆)​နေ​ရာ​ရ​ထား​တော့	ဦး​ရာ​ဝိ​က
Read more	​မ​ရှုပ်​မ​ရှင်း ၃၄၂
( 21 February 16 ) ﻿
၅၉ (​စ)​သည်​ပြင်​ဆင်​ရန် ​အ​လွန်​ခက်​အောင်​ပုဒ်​မ​မျာ​စွာ​ဖြင်. ​ချုပ်​နှောင််​ထား​သော်​လည်း ၊​ပုဒ်​မ ၃၄၂ ​မှာ ​ဘာ​
သ​လို​လွယ်​ကူ​လွန်း​နေ​သည်. ​ဟာ​ကွက်​ကြီး​	သ​ရ​ဝဏ်(​ပြည်)
Read more	၅၉(စ)ဆိုင်းငံ့ရေး အလုပ်မဖြစ်နိုင်ပါ
(4February 16 ) ﻿
ပုဒ်မ ၅၉(စ)တွင် ဖော်ပြပါခြွင်းချက်ဖြည့်စွက် သည့်နည်းလမ်းကို
ဦးစားပေး၊ စဉ်းစားသင့်ကြောင်း၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်
Read more	ကောလာဟလသတင်းများနဲ့ နိုင်ငံရေးချိန်ခွင်လျှာ
( 24 January 16 ) ﻿
စစ်အုပ်စုကလောင်ရှင်အချို့ ပြောသလို NLD အစိုးရအတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေ မနည်းလှပါ။
တိုင်းရင်းသားအရေးလည်း ပါသလို မြစ်ဆုံစီမံကိန်း၊ ဘင်္ဂလီပြဿနာ၊ ခရိုနီပြဿနာ၊ ဦးပိုင်ပြဿနာ ၊ ပညာရေး
သပိတ်ပြဿနာ စသည် စသည် အများကြီးပါပဲ။ ဖွတ်အစိုးရက ဘာတစ်ခုမှ ဖြေရှင်းမသွားတဲ့ ပြဿနာတွေပါ။
အချိန်ဆွဲဆွဲပြီး ချန်ထားခဲ့တဲ့ U Ravika
Read more	စစ်တပ်ကို ပြုပြင်နိုင်မလား
စစ်အာဏာသိမ်းပြီး မကြာမီ (၁၉၉၀) မှာ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီနဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေး
ကော်ပိုရေရှင်းကို တည်ထောင် ပါတယ်။ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အစုရှယ်ယာ (၄၀) ရာခိုင်နှုန်းကို စစ်ရုံးကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး (၆၀) ရာခိုင်နှုန်းကို စစ်တိုင်း (၁၂) ခု၊ ရဲဘော်ဟောင်း
အသင်းနဲ့ အငြိမ်စား စစ်ဗိုလ်တွေ ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။	ဦးအောင်ခင်
Read more	အပြောင်းအလဲနှင့် သဘောထားကြီးခြင်း
( 20 December 15 ) ﻿
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အတိတ်ကိုသင်ပုန်းချေပြီး အာဃာတအငြိုး အတေးကင်းစွာနဲ့ ရန်သူလို့ သ ဘောမထားဘဲ တိုင်းပြည်ကောင်း စားရေးအတွက်ပဲ ကြည့်မယ်၊ ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာ
သူ့ရဲ့ သဘောထားကြီးမှုကို ပြသလိုက် တာပါပဲ။ ညီစစ်ငြိမ်း
Read more	မြန်မာနိုင်ငံကနေ တရုတ်ကိုဖယ်ရှားနေတဲ့ အမေရိကန်
( 8 December 15 ) ﻿
သူတို့နှစ်နိုင်ငံကြား တင်းမာခါးသီးမှုတွေက ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွား နေသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သူတို့နှစ်ဦးက ယခုအချိန်အထိအကြမ်းပတမ်းမပါ အေးအေး ဆေးဆေး ရင်ဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်နေကြ ၏။ ယခုအချိန်တွင်မူ အမေရိကန်နိုင်ငံဘက်က အနိုင်ရတော့မည့်ပုံရှိပါသည်။	ထားထားမြင့်